Iibrasi ezingama-730 kunye nepanty: Isela elineengubo zangaphantsi ezibanjwe eJapan
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJapan eziQhekezayo » Iibrasi ezingama-730 kunye nepanty: Isela elineengubo zangaphantsi ezibanjwe eJapan
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • inkcubeko • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ityala elibonakala lingaqhelekanga lokuba impahla yangaphantsi ayisiyonto ingaqhelekanga eJapan.
Amapolisa aseJapan avale indoda ngenxa yokuba iibras kunye nepanty.
Indoda ibiba iimpahla zangaphantsi zabafazi kwindawo yokuhlamba iimpahla.
Amapolisa afumene iziqwenga zangaphantsi ezibiweyo eziyi-730 kwikhaya lomrhanelwa.
Amapolisa akwidolophu ekumazantsi eJapan iBeppu abambe umrhanelwa ngezityholo zokuba amaqhosha ama-730 ezimpahla zangaphantsi zabasetyhini kwindawo yokuhlamba iimpahla, emva kokuba umfundi oneminyaka engama-21 ubudala wasekholejini axele ukuba izibini zangaphantsi zangaphantsi zanyamalala kwindawo yokuhlamba impahla.
IBeppu Amapolisa agqogqa ikhaya likaTetsuo Urata oneminyaka engama-56 kwaye axelele amajelo eendaba ukuba “khange balithathe inani elikhulu kangaka leepanti kwiminyaka edlulileyo.”
Amapolisa athabathe iziqwenga zeengubo zangaphantsi zabasetyhini ezingama-730 ngexesha lokukhangela, nelilandela ukumangalelwa kukaTetsuo kumfundi ongumfazi oneminyaka engama-21 ubudala wasekholejini. Uxelele amapolisa ukuba u-Tetsuo waphanga izambatho zangaphantsi ezintandathu kwindawo yokuhlamba iimpahla nge-24 ka-Agasti.
Umtyholwa uxele ukuba ubile isixa esikhulu sempahla yangaphantsi efunyenwe kwindawo yakhe.
Ityala elibonakala lingaqhelekanga lokuba impahla yangaphantsi empeleni ayiqhelekanga ngaphakathi Japhan.
Ngo-Matshi, u-Takahiro Kubo, owayesebenza ngombane oneminyaka engama-30, watyholwa ngabasemagunyeni ngokweba iziqwenga zangaphantsi ezingama-424 kunye neempahla zokudada ezisuka kumantombazana akwishumi elivisayo kumazantsi mpuma eSaga.
Kwi-2019, amapolisa afumene ngaphezulu kwe-1,100 yezinto zezambatho zangaphantsi zabasetyhini ezigcinwe kwityala le-futon emva kokuhlasela ikhaya likaToru Adachi kwisithili sase-Oita eselunxwemeni, omnye umrhanelwa wesela laseJapan.